Silvia Romano oo shalay markii ugu horreeysey dibedda usoo baxday & saxaafadda oo kula kacday arrin TAKOOR ah! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Silvia Romano oo shalay markii ugu horreeysey dibedda usoo baxday & saxaafadda...
Silvia Romano oo shalay markii ugu horreeysey dibedda usoo baxday & saxaafadda oo kula kacday arrin TAKOOR ah!
(Milano) 26 Maajo 2020 – Saxaafadda Talyaaniga ayaa buunbuunisay marka ugu horreeysay ee ay guriga ka baxday Silvia Romano, si ka duwan dadkii horay loo qafaashay ee lasoo daayey.
Caa’isha ayaa shalay markii ugu horreeysey kaddib 14 maalmood oo karaantiil gurigeeda ka baxday, si ay u tagto dukaan ah kuwa is qurxinta, saacadda maxalliga ihi markii ay ahayd 15:04.
Yeelkeede, waxaa warkan baahisey Wakaaladda Wararka Talyaaniga ee ANSA, waxaana markiiba sii faafiyey inta badan saxaafadda warka badan ee Talyaaniga, taasoo marka laga yimaado inay ka horjeeddo khusuusiyadda Caa’isha misna halis wayn nafteeda gelin kartey.
Sida ay qorayaan La Luce iyo Open Online, sababta sidaa loo yeelay waa inay tahay qof Muslimad ah misna haween ah oo weliba jalaabiib wayn sidata.
”Isla markii ay dayuuradda kasoo degtey waxaannu ku xugminnay dharkii ay xirnayd, balse ma eegin dhoolla caddaynteeda diirran, sida ay hooyadeed, aabeheed iyo walaasheed hab u siisey. Waxaan ka doodnay qiimihii lagu soo furtay sidii inay naftu sicir u go’an leedahay.” ayaa lagu qoray Open Online oo sheegay in cinwaanno ceebeed laga qoray, gaar warqaadyada Libero iyo Il Giornale.
”Ma kula tahay in aad kali 18 bilood ku noqoto meel u dhaxaysa Kenya iyo Somalia, iyadoo ay kugu gedaaman yihiin niman aan ku hadlaynin luuqad aad fahmayso, kuna dili kara xilli kasta, ay tahay fasax tamashle ah? May! Waa calwasaas aysan weli Silvia kasoo miirsan.” ayaa lasii daba dhigay qoraalkan oo uu sameeyay Fabio Giuffrida.
Caa’isha ayay doodeheedu xitaa gaareen Baarlamanka Talyaaniga iyadoo uu ku xigeenka Lega Nord ku dooday inay tahay ”argagixiso cusub” oo lasoo daayey, halka ay hanjabaado dil ah kala kulantay dad is qariyey.
Previous articleDAAWO: Ciidamada AMISOM, Dowladda oo arrin halis amaan leh ka sameeya garoomada dayuuradaha
Next articleMaraykanka oo isha ku haya dhaqdhaqaaqa Ruushka ee Libya (Dayuurado uu si qarsoodi ah ku geliyey oo la kashifay & halka ay soo mareen)